Magnetic Hlunga Bar - China Ningbo Sine
Uphiko IngxenyeNamandla unomphela amashubhu kazibuthe fixed ungene nohlaka. Lapho yini equkethe yensimbi / steel izinto sidlula ngohlaka, izinto zensimbi / steel babeyozihlanganisa phezu kodonga amashubhu. Ngenxa yalokho, imishini yakho futhi izindawo kuyoba ephephile futhi ephilile, kanye nemikhiqizo yakho kuyoba ephephile ukusetshenziswa.
Model PMGL izihlungi kazibuthe zingasebenza kakhulu emithini yokwelapha, ukuthuthwa kwendle, zendwangu, imishini kanye nokudla. I filer uyokhanga izinto yensimbi / steel kude uketshezi, kusukela phakathi okusanhlamvu noma izimpushana.
I lobuchwepheshe kwemigomo ibha kazibuthe
Previous: Magnets Isilawuli
Olandelayo: Magnetic Hlunga Izinsiza kusebenza